Kuthiwani uma ukumaketha kwakho kusebenza? | Martech Zone
NgoMsombuluko, Februwari 1, 2010 NgoLwesihlanu, Agasti 2, 2013 UMat Nettleton
Njengomqeqeshi wokuthengisa ngisebenza nezinkampani ezimbonini ezahlukahlukene. Futhi cishe yonke inkampani engisebenza nayo isebenzisa imali ethe xaxa kulo nyaka kunasekugcineni ekumaketheni okugxilwe kwi-inthanethi, kufaka phakathi imithombo yezokuxhumana.
Ngeshwa kweziningi zalezi zinkampani, ukumaketha kwabo nge-inthanethi sekuqala ukusebenza futhi bathola izingcingo nama-imeyili kubathengi abanogqozi ababatholile futhi ababalandela kwi-intanethi. Kepha babona ukuthambekela okukhathazayo, ukumaketha kungadala ukuhola kepha amaqembu okuthengisa anenkinga enkulu kunangaphambili.
Amathemba e-Intanethi akubona abantu owawubathengisela eminyakeni emi-3 eyedlule. Labo bantu abavela eminyakeni emi-3 eyedlule bebazi okuncane kakhulu ngawe bebengazi ngokweqiniso ukuthi uthengiseni noma ukuthi ukuthengise kanjani. Babengazi ukuthi wenzeni kahle noma yimuphi umqondo ngalokho okungenzeka ukuthi wakwenza kabi. Empeleni, eminyakeni emi-3 eyedlule ngenkathi ubuza umbuzo isicelo esivame kakhulu esivela kulokho obekungathi 'ngitshele ngalokho okwenzayo nokuthi ukwenze kanjani.? Ithemba lanamuhla alifuni ukwazi? Wenzani nokuthi ukwenze kanjani.? Futhi lokho kudala ukungaxhumani okukhulu phakathi kwabathengi nabathengisi khona manje.
Ithemba lanamuhla likukhathaze, lavakashela ikhasi lakho le-facebook, lakulandela ku-twitter futhi lafunda izibuyekezo ngawe ku-yelp. Bayakwazi okwenzayo, ukukwenza kanjani nayo yonke imininingwane ehlazisayo yamaphutha owenzile onyakeni odlule. Banesizathu sokuxhumana nawe futhi akukhona ukuthi bafundelwe incwajana.
Ithemba elisha alifuni ukufunda ngawe-kuwe. Bazi okuningi kwalokho ngaphambi kokuba ufinyelele kubo. Uma ukumaketha kwakho kwakha ukuhola futhi iqembu lakho lokuthengisa lingakwazi ukuwavala inkinga ngokuvamile akuyona ikhwalithi yemikhombandlela yakho. Inkinga imvamisa ikhwalithi yenqubo yokuthengisa oyivumela ithimba lakho lokuthengisa ukuthi lisebenzise.
Uma inqubo yakho yokuthengisa yakhelwe ukutshela abantu ngawe inamaphutha futhi udinga ukushintsha.
Qinisekisa ukuthi ibhizinisi lakho linenqubo ehlelekile ongayithola kungani ithemba likuthintile. Lapho uqonda izidingo zethemba, lapho-ke ubeka ibhizinisi lakho endaweni ezophumelela ngabathengi banamuhla.
Tags: ukumaketha kwe-bluetoothWordPress